Otu esi etinye ihe nchọgharị Vivaldi na Fedora 34/35 - LinuxCapable
November 3, 2021 October 10, 2021 by Jọshụa James
Bubata ebe nchekwa Vivaldi
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta ka esi etinye ya Vivaldi Browser na Fedora.
Site na ndabara, ebe nchekwa Fedora enweghị Vivaldi nke ala nna ya, yabụ ị ga-ebubata Vivaldi RPM gọọmentị.
Mbụ, mebie iwu a ka ịwụnye dnf-utils ngwugwu. Gbaa iwu a ma ọ bụrụ na ejighị n'aka. Ọ gaghị emerụ ahụ n'ụzọ ọ bụla.
Na-esote, bubata ebe nchekwa site na iji iwu a.
Ugbu a agbakwunyere ebe nchekwa ahụ gosi na iji ya dnf repolist iwu.
Dị ka n'elu na-acha ọcha isi, ị nwere ike ịhụ na Vivaldi repository na-agbakwunyere nke ọma.
Ugbu a ị nwere ike ịga n'ihu ịwụnye ihe nchọgharị ahụ.
Ugbu a ibubatala ebe nchekwa ahụ, ị ​​nwere ike tinye Vivaldi site na iji ihe ndị a.
Mara na ị ga-ahụ ngwa ngwa na-esote na ọdụ gị maka mbubata GPG n'oge nrụnye.
Agbanyeghị, nke a abụghị ihe bara uru, ma ị ga-eji ụzọ a na desktọpụ gị mepee ụzọ ahụ: Ihe omume > Gosi ngwa > Vivaldi. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ ya, jiri ọrụ ọchụchọ dị na menu Gosi Ngwa ma ọ bụrụ na etinyere ọtụtụ ngwa.
Ekele, ị rụnyela Vivaldi Browser nke ọma na desktọpụ Fedora gị.
Ka imelite, mee ihe Iwu melite DNF na ọdụ gị ka ị ga-elele sistemụ gị niile maka mmelite ọ bụla.
Ị mụtala otu esi ebubata Vivaldi rpm na nkuzi wee wụnye ihe nchọgharị weebụ.
Categories Fedora Tags Fedora 34, Nchọgharị Vivaldi Mail igodo